£ 100 IComposit
Qaphela: Ngethuba lokubhala olu hlaziyo, iimarike.com zenze uphawu lokushicilela kwakhona ngo-Novemba ka-2019 kwaye sele litshintshe igama lazo laba ziiMarketX. Nangona kunjalo, kolu hlaziyo, siya kubhekisa kwiMarketsX njengeMarkets.com ngokuqonda ngokulula kwabo bangalwaziyo utshintsho lwegama.
IComposit £ 100
Inani leeasethi 4
Iindidi zeeasethi I-CFD, i-Forex, i-Crypto, iStock
Markets.com ngumthengisi weFX kunye neCFD kwihlabathi liphela. Eyasungulwa ngo-2008, iMarkets.com ilawulwa yi-Safecap Investment Limited elawulwa yiCypriot Cysec kunye ne-FSCA yaseMzantsi Afrika. Uninzi luthatha iMarkets.com njengekhuselekileyo ukusukela oko inkampani yabazali bayo, iPlaytech, ikwisitokhwe saseLondon kwaye yindawo ye-FTSE 250 Index.
Okwangoku, iqonga libonelela ngorhwebo kwii-asethi ezingaphezu kwe-2,000 ezinje ngee-CFDs, i-Forex, isitokhwe, ii-indices, ii-cryptocurrensets, iibhondi kunye nee-ETFs. Ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezi-5 ababhalisiweyo, iqonga lifumana malunga nezigidi ezili-13 zorhwebo ezibekwa minyaka le eziguqula malunga ne- $ 185 yezigidi ngexabiso lokuthengisa. Ukongeza, iiMarkets.com zibonelela ngenkqubo yokurhweba enokubhengeza ngakumbi kubarhwebi abasisiseko endaweni yezobuchwephesha.
I-Markets.com yasekwa ngo-2006 kwaye yaba ngumrhwebi oqinisekisiweyo we-forex ngo-2008. Ikhule yaba ngumrhwebi owaziwayo kwisithuba esifutshane sexesha esithe sanikwa amandla kukusebenzisana namaqabane akwizinga eliphezulu kolu shishino. Ngokwolwazi olufunyenwe Umhla wokubekwa.comIimarike.com zinamabhaso amaninzi phantsi kwebhanti yayo kubandakanya:
Ibhaso lomrhwebi ogqwesileyo kwiNkonzo yaBathengi eYurophu ngo-2012 (iGlobal Banking kunye neMali yoPhononongo)
Ibhaso ngeNkonzo eNgcono yaBathengi 2012 (Umtyalomali waseLondon ubonakalisa i-Forex)
Ibhaso loMboneleli we-Forex woNyaka we-2017 (amabhaso e-UK Forex)
Ibhaso leQonga lokuRhweba ngokuPhambili le-2017 (amabhaso e-UK Forex)
Iimpawu zeMarket.com kunye neeNzuzo
Inika iifizi zokurhweba eziphantsi
Inkqubo yokuvula i-akhawunti igudile kakhulu kwaye iyakhawuleza
Inikezela ngezixhobo ezahlukeneyo zophando
Inika uluhlu olubanzi lweeasethi kurhwebo
Inikezela ngeqonga labarhwebi beMarketX yeWebhu enobuntu obunobunkunkqele obunobutyebi.
Inika uluhlu olubanzi lwezixhobo zokurhweba kunye neenketho zokuxhasa abathengi
Isoftware yayo ehambelana ngaphandle komthungo kunye neqonga layo lewebhu.
Nika inani lamaqonga orhwebo kubandakanya iqonga elisekwe kwiwebhu.
Iiofisi zehlabathi zinika ukufikelela okulula nokuguqukayo kukhetho olufana nokuphakamisa okuphezulu kunye / okanye ukukhushulwa kwebhonasi.
Iqonga aliboneleli ngelahleko yokumisa eqinisekisiweyo.
Kukho izikhalazo zemirhumo efihliweyo kunye neendleko
Banezinto ezinqongopheleyo zemfundo kwiqonga labo lokuthengisa
Banikezela ngaphezulu kweqondo lokutshintsha okuphakathi.
Iqonga labo linobuthathaka ekusebenzeni kweendaba.
Ababoneleli ngenkxaso yeempelaveki. Ngeentsuku zomsebenzi kuphela.
Abasebenzisi abavela e-US, Canada, Belgium, Australia, Japan, nase India abanakho ukufikelela kwiqonga lokuthengisa.
I-Markets.com inenkxaso yokuthengisa i-Bitcoin Futures, i-Ethereum, iLitecoin, iDash, iRipple, kunye neBitcoin Cash. Nangona kunjalo, abathengisi banokuthengisa kuphela ii-CFD ze-cryptocurrency oko kuthetha ukuba abanakubamba ngokuthe ngqo naziphi na iiasethi zedijithali. Ngesi sizathu, akukho sidingo sokwenza isipaji se-cryptocurrency njengoko unokulawula zonke iiasethi ukusuka kwinqanaba leqonga. Ukongeza, urhwebo lwe-cryptocurrency lwenzeka nge-24/7 ngekamva le-Bitcoin lithatha ikhefu phakathi kwe-22: 00 kunye ne-23: 00 GMT.
Ungabhalisa njani kwaye urhwebe ngeMarkets.com
Ukubhalisa eqongeni yinkqubo elula elula nethe tye. Kukho ividiyo efundisayo kwindawo yabo ekusa kwinkqubo apho kunokwenzeka ukuba kubenzima nakubani na. Nje ukuba uqale ukubhalisa, kuyakufuneka ungenise ulwazi olusisiseko njengegama lakho, inombolo yefowuni, umhla wokuzalwa kunye nedilesi. Emva kwexesha, kuyakufuneka ubonelele ngolwazi lwakho lwezezimali kunye nerhafu. Okokugqibela, kuya kubakho imibuzo embalwa eya kuthi ilinganise amava akho okurhweba kunye nobungcali bezezimali ngokubanzi kurhwebo.
Nje ukuba ubhalisele iakhawunti, kuyakufuneka ungenise amaxwebhu aliqela okuqinisekisa. Oku akukhathaleki kuyo nayiphi na iofisi ogqiba ekubeni ubhalise kuyo. Ukwenza oku, kuya kufuneka ungene kwiakhawunti ebhalisiweyo kwaye ungene 'kuQinisekiso'. Nje ukuba ufike, uyakufumana icandelo apho ungafaka khona amaxwebhu obungqina bendawo yokuhlala kunye nokuchongwa (i-POR kunye ne-POI). Amaxwebhu asemthethweni e-POI abandakanya ii-ID zesizwe, iipaspoti kunye nelayisensi yokuqhuba. Kwi-POR, uxwebhu lunokuba yiyo nayiphi na into esetyenziswayo: amanzi, umbane, irhasi, ifowuni, intambo, okanye i-intanethi, okanye ingxelo yekhadi letyala / ledebhithi.
Yazi nje ukuba nje ukuba iakhawunti yakho iqinisekiswe ngokupheleleyo, ngekhe uphinde ukwazi ukutshintsha iinkcukacha zakho kwakhona. Ke ngoko, ukuba uzifumana ukwimeko apho kufuneka uhlaziye naziphi na iinkcukacha zakho, kuya kufuneka unxibelelane nenkxaso yeMarkets.com ngoncedo. Kwakhona, lungela ukubabonelela ngamaphepha ongezelelweyo ukuqinisekisa izicelo zakho.
Inxalenye yenkqubo yobhaliso iya kuba kukukhetha phakathi kweakhawunti ezininzi. Iiakhawunti oya kuthi ukhethe kuzo zibandakanya:
Iakhawunti yokwenyani: Iakhawunti eqhelekileyo yokuthengisa.
Iakhawunti yeDemo: Iakhawunti yokuziqhelanisa nesimahla kwaye iyafumaneka ngexesha elingenamda.
Ukutshintsha iakhawunti yasimahla: Iakhawunti yobuSilamsi enobuntu. Isebenza ngaphakathi kwemithetho ye-Sharia yamaSilamsi yorhwebo olungenamdla.
Zonke ezi akhawunti zinika amanqaku afanayo njengeewebhu, uhlalutyo lweemarike zemihla ngemihla, kunye nenkxaso yabathengi yeeyure ezingama-24 ngokwahluka kwemizuzu apha naphaya.
Ungathengisa njani ngeMarkets.com
Kulabo abakhetha umboniso wendlela yokuthengisa kwiMarkets.com, iwebhusayithi yabo ibonelela ngendlela yevidiyo yokwenza urhwebo. Kulungiselelwe abo bakhetha inkcazo ebhaliweyo, nanga amanyathelo:
Khetha i-asethi usebenzisa uluhlu kwicala lasekhohlo leqonga lokuthengisa. Ukukhetha i-asethi kuya kwenza ukuba i-asethi ivele embindini wesikrini kunye nolwazi olufanelekileyo kunye namaxabiso.
Kwicala lasekunene lesikrini, uya kubona ukhetho lokuthenga okanye lokuthengisa iasethi. Cofa ekuthengeni ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukuthenga i-asethi yedijithali kwaye xa uthengisa ukuba ufuna ukuthengisa i-asethi esezandleni zakho.
Ifestile ezivelelayo-ziya kuvela kunye neenkcukacha ezinje ngokuthenga kunye nokuthengisa amaxabiso, ubuncinci bobukhulu bezorhwebo, iindlela zorhwebo, njl. Gcwalisa ifom kwaye ukhethe "Indawo yoku-odola."
Enye inketho ongayisebenzisa ukwenza urhwebo ngokubiza iDesika yokuThengisa ngqo kwaye ubeke i-odolo kwifowuni. Nangona kunjalo, yazi ukuba iDesika yokuThengisa ifumaneka kuphela ngesiNgesi.
Iqonga lokuthengisa iMarkets.com liyafumaneka kwiilwimi ezininzi ezinje ngesiArabhu, isiNgesi, neSpanish. Ukongeza, abathengisi banenkululeko kunye nokuguquguquka kokukhetha ukuba bathengise kwiMarkets.com kwiqonga lewebhu kwi-intanethi okanye ngesicelo sabo esiphathwayo. Ngomrhwebi weWebhu, awudingi ukukhuphela izixhobo ezongezelelekileyo njengayo yonke into enjengezixhobo kunye neempawu eziphambili ezifumaneka ngokulula eqongeni. Nge-mobile app, unokufuna ukukhuphela izinto ezimbalwa.
Uhlelo lokusebenza lweselfowuni luyafumaneka kubasebenzisi be-Android kunye ne-IPhone. Uhlelo lokusebenza luqala ngokukhawuleza kwaye luxhomekeke kwitekhnoloji efanelekileyo. Iqonga lokurhweba likwaxhasa urhwebo ngeMetaTrader 5 (MT5) enokhetho kubarhwebi abaziingcali. Ukongeza, iqonga libonelela ngokwezifiso kwinqanaba eliphezulu njengokukhetha phakathi komnyama okanye umxholo okhanyayo. Ukufikelela kwezi, yiya kwi 'Akhawunti yam kunye nokuCwangciswa'kwaye ukhethe' Iimpawu zePlatform. '
Markets.com yinxalenye yeTrendetech Markets Pty Ltd ebekwe e-Australia. I-Tradetech Markets Pty Ltd ijongwa yiKhomishini yoKhuseleko kunye nezoTyalo-mali yase-Australia.
I-Tradetech Markets Pty Ltd kunye ne-Safecap Investments Ltd zombini ziinkampani zePlayPlaych PLC. I-Playtech ikwadweliswa kwi-LSE (eLondon Stock Exchange) kwaye iyinxalenye ye-FTSE 250 Index.
Kwingingqi yaseYurophu, ilawulwa yiSafecapInvestmets Ltd ejongene ne-FSCA kunye neCySEC. Abathengi kunye nabathengi abaqeqeshiweyo kulo mmandla banokufikelela kwi-1: 30 kunye ne-1: 300 ngokwahlukeneyo. Kukho iMbuyekezo yoTyalo-mali ephezulu njenge-20,000 Euro.
Kwingingqi yaseAfrika, ilawulwa yiTradeTech Markets Pty Limited eMzantsi Afrika. Ke ngoko, ijongwa liSouth African FSCA (iGunya lokuZiphatha kweCandelo lezeziMali). Abasebenzisi balo mmandla banokufikelela kwi-1: 300 kwaye bafumane ibhonasi yokuqala yediphozithi ephezulu njenge-35%.
E-Australia, ilawulwa yi-AutralianTradetech Markets Pty Ltd. Ilawulwa yi-ASIC. E-Australia, abasebenzisi bafumana ukufikelela kwi-1: 300 ngebhonasi yokuqala yediphozithi eyi-20%. Kuyo yonke imimandla, iMarkets.com inento eyaziwa ngokuba yiNigative Balance Protection egcina iimali zabathengi kwiiakhawunti zebhanki ezahlukeneyo zokhuselo olongeziweyo.
Iimali zeMarkets.com kunye neMida
Ngokwezikhalazo ezininzi ezivela kubasebenzisi, iqonga liyabiza kwaye alikhuphisani nezinye iinkokheli zeshishini ezinje ngeentengiso zeCMC okanye i-IG. Ukusasazeka okuncinci kungaphezulu komndilili. Ukusasazeka kobuncinci bemali yedijithali zezona ziphakamileyo eYurophu kwii-140 iipips zeBitcoin kunye namanqaku ali-15 e-Ethereum.
Ukurhoxiswa kwemali simahla kwaye kunokufunyanwa phakathi kweentsuku ezi-2 ukuya kwezi-5 zomsebenzi. Iiakhawunti ezineenyanga ezintathu zokungasebenzi zihlawuliswa malunga ne- $ 10 ngenyanga. Le ntlawulo ifihliwe ngokukodwa kwaye ayichazwanga njengeminye imirhumo. I-Market.com igcina uluhlu oluhlaziyiweyo lwalo lonke usasazo kunye nemida yokunyusa kwiwebhusayithi yabo.
Markets.com Iindlela Zokuhlawula
I-Markets.com inikezela ukhetho olubanzi lweendlela zokufaka. Oku kubandakanya:
Amakhadi etyala / okuthenga
Iindlela ezifanayo zokufaka ngaphezulu zingasetyenziselwa ukurhoxisa. Nangona kunjalo, kwibhodi yokuhlala uhambelana nemithetho yokuxhaphaza imali, iMarkets.com inyanzelisa ukuba ukurhoxiswa kwenziwe ngendlela enye esetyenzisiweyo yokufaka imali. Ngethamsanqa, akukho nto ixabisa kwaphela ukurhoxisa. Ezona mfuno zisezantsi zokurhoxa zidweliswe ngolu hlobo lulandelayo:
Udinga ubuncinci be-10 yeedola / i-GBP / i-EUR ukuze urhoxe ngekhadi okanye ngetyala.
Ufuna ubuncinci be-5 USD / GBP / EUR yokurhoxisa ngeNeteller okanye ngeSkrill.
Ufuna ubuncinci be-100 yeedola / i-GBP / i-EUR ukuze urhoxe ngokudlulisa ngocingo.
Amaxesha okurhoxa ayahluka ngokuxhomekeka ekubeni yeyiphi indlela yentlawulo esetyenzisiweyo. Zonke zilele kumzi-mveliso omnye oqhelekileyo kwiintsuku ezininzi zomsebenzi ezihlala ziphakathi kweentsuku ezi-2 ukuya kwezi-5 zeshishini.
Markets.com Inkxaso yoMthengi
Inika inkxaso ye-24/5 efikelelekayo ngencoko okanye ngephepha loqhakamshelwano kwindawo yabo esemthethweni. Unokufumana iphepha labo 'Nxibelelana nathi' kwindawo yabo emazantsi ephepha okanye kwikona esekunene kwiphepha 'leZiko leNkxaso'. Iphepha 'leZiko leNkxaso' likwavula kwi-FAQ kunye nonxibelelwano lwabo kunye nezonxibelelwano. Amanqaku eMarkets.com kuFacebook nakuTwitter asetyenziselwa ukuthengisa kunye nokuhlomla ngaphezulu, kuba iimark.com zisehlabathini lonke, inkxaso yayo ineelwimi ezininzi kwaye iza ngeelwimi ezahlukeneyo ezinje ngeSpanish, isiNgesi, isiFrentshi, isiTaliyane, isiJamani, isiArabhu, kunye nesiBulgaria.
Markets.com izindlu uluhlu lwezixhobo zophando ezongezelelweyo kunye nezinto eziluncedo ngakumbi kubathengisi bokuqala. Zonke ezi zibonelelo ziyafikeleleka kwicandelo leMfundo. Ezinye iinkonzo ezikhoyo eqongeni zibandakanya:
Imicimbi & noRhwebo
Zonke ezi zinto zilapha ngasentla zijolise ekuncedeni ukuba ufunde ukurhweba, ukusuka ekuboneni amathuba anokubakho ophando olunzulu lwentengiso. Uninzi lwezi zixhobo lunokufumaneka ngaphakathi kweqonga lokuthengisa kwiakhawunti eqinisekisiweyo. Ngaphezu koko, abasebenzisi banokufikelela kwi-feed yeendaba ngqo kwiqonga.
Ngelishwa, iqonga alinawo amaqonga engxoxo okanye amagumbi apho abathengisi banokuzibandakanya kurhwebo lwentlalo. Kuyihlazo kuba ezo zinto ziluncedo ikakhulu kubathengisi be-novice abafuna ukutshintshiselana ngezimvo kunye nokuchazwa kwemixholo enzima. Ukongeza, iqonga aliboneleli ngorhwebo oluzenzekelayo olunokuba luncedo kumaxesha xa abathengisi bafuna ikhefu kurhwebo.
I-Markets.com inikezela bobabini abasaqalayo kunye nabatyali mali abanobuchule bokuthengisa malunga nee-asethi ezingama-2,200 kwiqonga elinye kuphela. Ngaphaya koko, inkqubo yabo yokubhalisa iakhawunti ikhawuleza kakhulu kwaye iyakhawuleza. Abaqalayo banokhetho olongeziweyo lokuzama iakhawunti yokubonisa ukufumana imvakalelo yeqonga ngaphandle kokulahlekelwa yimali yabo. Iqonga labo lokurhweba linomdla kwaye linika inani elikhulu lezixhobo zohlalutyo olusisiseko kunye nezobuchwephesha kubasebenzisi. Ngaphaya koko, iqonga lilawulwa ngemimandla eyahlukeneyo kwaye ngenxa yoko likhuselekile kurhwebo.
IsiNgesi, iSpanish, isiFrentshi, isiJamani, isiTurkish, isiPolish, isiPhuthukezi, isiTaliyane, isiDatshi, isiTshayina, isiArabhu
I-CFD, i-Forex, i-Crypto, iStock
I-Safecap ilawulwa yi-FSB, iCySec